CANAB ISABELLA: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SIFOOYINKA, TAARIIKHDA TARANTA IYO GOBOLADA SII KORDHAYA, CUDURADA IYO CAYAYAANKA, SAWIR - BEERTA
Quruxda Isabella: waa maxay wanaagsan tahay iyo nooca faa'iido la'aanta ah ee ay leedahay?
Midhaha canabeelka Isabella waxay leeyihiin dhadhan strawberry nadiif ah, oo canabkiina si joogto ah ugu faraxsan wax soo saarka wanaagsan xitaa carrada saboolka ah.
Kala sooc aan qabin ee daryeelka, laakiin waxay u baahan tahay qadar ku filan qoyaanka ciidda muddada diiran.
"Isabella" - farsamo, dabayaaqadii dhammaadkii kala-soocid aan kala go 'lahayn, oo ku haboon isticmaalka cusub, lakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa sida wax soo saarka ee casiirka ah, mashiinka miiska nalalka. Goobaha gaarka loo leeyahay waxaa loo isticmaalaa samaynta macaanka, macaanka, qasacadeynta.
Noocyada farsamada waxaa ka mid ah Levokumsky, Bianca iyo August.
Wax-soo-saarka, dhadhanka iyo caabbinta fiican ee cudurada dalagga ee caadiga ah ayaa sameeyay noocyada kala duwan ee loogu talagalay in badan oo hareeraheeda ah oo xiiseynaya soo saarista dagan ee mugga ballaaran.
Iskuday in caaradajabinta phylloxera, oidiyoonlaakiin waxay u nugul yihiin chlorosis iyo anthracnose.
Canab Isabella: sharaxaadda kala duwan
Canab dhirta bislaaday "Isabella":
qaabka cylindrical-ka (mararka qaarkood xayeysi ayaa leh qaab muuqaal ah);
oo leh cabbir isku mid ah, wareegsan, marmarka qaarkood wax yar, miro madow mugdi ah.
On dusha sare ee miro guduud mugdiga classic (mugdi ah) "Isabella" oo ah furfurnaan fudud oo cad, iyaga oo ka dhigaya mid cagaaran.
Saxarka miro ayaa ah muusik, cagaaran-jaalle ah, oo leh shades of strawberry dabiiciga ah ee dhoobada. Dareemku waa cufan yahay oo adag, si sahlan ayaa looga soocayaa qashir-saarka cadaadiska. Boqolkiiba tirada mugga ee la xidhiidha mugga faa'iido leh ee ilmaha caloosha ku jira waa mid aan muhiim ahayn.
Miisaanka ugu badan ee berry ah ee gacanta gacanta ku jirta waa 2-2, 5 g oo ah sonkorta sonkorta waa 16-18%, hoos u dhigmid la'aanta waa 7-8 g / l.
Iyada oo caleemo qoyan ku filan ee baadiyaha leeyihiin midab cagaaran iftiin.
Buraashka geedka canjeeraha leh caleemo cagaaran leh oo leh midab cagaaran oo cagaar ah oo isku dhafan.
Geedka canabku si fiican ayuu u koraan, ku haboon yahay barkiis hareeraha ah, dayrarka.
Sidoo kale ku habboon yihiin qurxinta noocyo canabki Maid, Wall Galili, Arched.
Iyada oo muuqaalka muuqaalka canabel "Isabella" waxaa laga heli karaa sawirka hoose:
Isabella, oo Mareykan ah markuu dhalasho, waa in ka badan 200 oo sano. Tilmaamaha geedaha waalidku (Vitislabrusca iyo Vitisvinifera), iyadoo la marayo, ayaa la hagaajiyay by breed William Prince.
Waxaa ka mid ah noocyo American ah oo sidoo kale loo yaqaan Alpha, Witch Fingers iyo Buffalo.
Ilaa 80kii qarnigii la soo dhaafay, canabella canabel waxaa laga helay beeraha beeraleyda ah ee ka yimid dalal kala duwan iyo qaaradaba. Ka dib, ka mid ah winemakers oo isticmaalay noocyo kala duwan si khamri loo sameeyo, waxaa la rumaysan yahay in cabitaanka khamriga ee ku salaysan noocyada canabelnyh canabel ay ku jiraan xaddi lacageed methyl alkol.
Natiijo ahaan, arrimo duurka ah da'doodu kala duwan ayaa si tartiib tartiib ah u hoos maray mindida beeraha waaweyn ee France iyo inta badan gobolada America.
"Layaab" aan la fileynin ee sumcadda sumadda - weli wali lama ogeyn waxa ujeedada iyo qofka loo dhiibay - kama horjoogsanayo Brazilian, Portuguese, Japanese, Korean, iyo beeraha Canadian ka soo koraya Isabella. Waxaa sidoo kale caan ku ah gobollada diiran ee Ruushka iyo dalalka deriska ah:
Qayb ka mid ah noocyada dalxiiska iyo sheyga iyo badhkii methyl alkolmarka loo eego wines oo ku salaysan canabella canab.
Yield (xaaladaha wanaagsan ee ilaa 60 - 70 c / ha).
Frost adkaysi u. Iyadoo leh qaboobaha khafiifka ah, milkiilayaasha canabkiinna ma ay culus ku kicinayaan daryeelka hoyga canabkiinna. Marka ay qayb ahaan barafaysan, beeraha canabka ah waxay soo saaraan koboc aad u fara badan, oo awood u leh goosashada wanaagsan isla sannadkaas.
Iskuday in caaradawaxyeelada cayayaanka.
Isabella laguma talinayo kaydinta jiilaalka.
Maqnaanshaha wax ka badan noocyada mudada dheer, waxaad isku dayi kartaa ilaalinta qalalan: ku dhaji broze yar oo caafimaad leh oo qallalan oo ku jira 3 litir, ka dibna ku rid qoryaha hoose kuna dhig dabka.
Inkastoo iftiinku uu gubayo, ku shub weel kushi dabool leh. Habka wuxuu ku habboon yahay oo keliya isticmaalka gaarka loo leeyahay.
Isabella si fiican u dulqaadanayaa Maydhayaasha barafka, laakiin waxay u nugul yihiin la'aanta roobabka (dhibcood caleenta, waxay kordhisaa koror yar). Waxay si fiican u koraan carrada, laakiin ma jecla milixda milixda.
Iyada oo ay ku badan yihiin shimbiraha gobolka, doorbiday in ay canabka ku on canab, waxay dhigeen repellents, qaadashada qaansooyin of walxo dhalaalaya oo ku soo koraya dabaysha. Nylon "baqshi" caawimaad ka soo horjeeda shimbiraha caadiga ah: cirbadaha ayaa ku foorarsaday rucubyo "alaab aan lahayn".
Ka hor inta aanad ku ridin burushka, farabadan ayaa la baarayaa si loo ogaado cawska la jarjaray, oo aan caleenta lahayn. Caleemaha waa inaysan galin gudaha gudaha, sababtoo ah waxay faragelin doonaan hawo-qaadashada, waxayna u horseedi kartaa horumarinta caaryada on berry.
Intaa waxaa dheer in bees iyo beeska raalli ahaanshaha ay u qulqulayaan xargaha, lakulmiyay shimbiraha, cagaarka canabka, burooyinkeeda iyo miro ay jecel yihiin in la cuno:
baalaliyaal labadii sano ee la soo dhaafay (ka ilaali maareynta sunta cayayaanka marka la eego muuqaalka dhiciska);
Baalallay sabiib ah (tallaabooyinka ilaalinta kor ku xusan, falanqaynta: gubashada caleemo laga soo jarayo ilaa xilliga dayrta);
waxay dareemeen caaro (waxay isticmaalaan daawada sulfur-ku jira oo ka yimaada musiibada);
Caarada caarada (caawinta fosfamide, DNOC).
Waxaad ka akhrisan kartaa cudurada sida canabka ah ee khatarta ah sida kansarka bakteeriyada, bakteeriyada, rubella iyo noocyo kale oo qaybta gaarka ah ee boggeena.
Ma jiraa farqi u dhexeeya noocyada cad iyo madow?
Kala duwan ee canabella Isabella (Nuux) oo laga helay caawimo badan oo perepodvoev ah oo ku saabsan Chubuk kala duwan. Waxaa ka mid ah, laga yaabee, inay joogeen iyo wax la mid ah classic "Isabella." Sida awoowaha, noocyada kala duwan si fiican u koraa, muddada bislaado waa goor dambe, u adkaysata heerkulka hooseeya, caarada, phylloxera. Burushka waa cylindrical, cufnaanta dhexdhexaadka ah.
Berry wuxuu yaryahay, cirifka, cagaarka cagaaran oo leh caleemo jaale ah. Dhadhanka miro. Cuntada asalka ah waxay ku faani kartaa Ruth, Chocolate iyo Bazhena.
Under magacyada magacyada waa noocyada kala duwan ee dalalka kale:
Odessa (sababtoo ah dhalashada Georgia ee bixiyaha Odessa).
Seksarda (gudaha Croatia).
Fragola (Talyaaniga, Australia).
Albanian Sirius (New Zealand).
Marka la eego faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin canabella canabeel, "in badan oo gaajo ah ayaa laga soo gudbay," laakiin qofna ma uusan u iman ra'yi caadi ah. Gobollada ay rabto inay korodho, iyo tayada khamriga ma sameyso sheegashooyin gaar ah, dhadhanka strawberry, waxay xitaa ku jirtaa cabitaannada loo diyaariyay iyada oo saldhig u ah, sanadkiiba waxay ka dooneysaa malaayiin dad ah. Adiguna waa inaad adiga go'aansatid: inaad ku biirto safarkooda ama isku xiraan kuwa kasoo horjeeda Isabella.
Gacaliye qaali ah! Ka tag faallooyinkaaga ku saabsan canabella canab ee faallooyinka hoos ku qoran.